Aluminium mpandrendrika Lafaoro, Arc lafaoro lehibe, Automatic manorina - Rongtai
Professional mpanamboatra ny Heating Fitaovana Products efa ho 22 taona. Ny orinasa no misy ao amin'ny WeifangCity, Shandong. Hamaky bebe kokoa
Ny Factory dia nitombo lasa ny Premier ISO9001: 2008 voamarina mpanamboatra ny avo lenta, Cost-mandaitra vokatra. Hamaky bebe kokoa
Mametraka hatrany ny hatsaran'ny toerana tamin'ny voalohany, ary manara-maso tanteraka ny vokatry hatsaran'ny dingana rehetra. Hamaky bebe kokoa
Shandong Rongtai Induction Teknolojia Co., Ltd.
Fa ny 22 taona, Rongtai dia mifantoka amin'ny fanomezana miovaova sy mahomby MF induction fitaovana fanafanana.
Shandong Rongtai Induction Teknolojia Co., Ltd. dia naorina teo an 1997, dia avo-pirenena teknolojia orinasa fa nametraka ho an'izao tontolo izao-kilasy farany ambony-fitaovana manufacturer- Himile Group.
Induction mampitsahatra lafaoro Aluminum Shell ketraka ...
Inona no ve
Saha ny asa
ZAVA-NITRANGA Ary Expertise
GO akaiky ny
Nanomboka ny fananganana, Rongtai no mifikitra amin'ny lalana ny tsy miankina sy ny fanavaozana teknolojika R & D. Manana vondrona ambony-notch talenta ara-teknika ao amin'ny orinasa, ary efa nametraka ny faritany lenta laboratoara, ny faritany-anivon'ny orinasa teknolojia foibe, ny ben'ny tanàna lenta injeniera fikarohana sy ny fampandrosoana foibe. Misolo tena ny mandroso fari-MF induction teknolojia ao an-trano sy any ivelany, mandray anjara amin'ny fanitsiana ny firenena fari-"National Industrial Electric Heating Fitaovana-penitra Teknolojia", "Medium Frequency Coreless Induction lafaoro" sy ny "TOSIKARATRA Type Frequency fiovam-po Multiple Medium Frequency Coreless Induction lafaoro tanteraka Set "ny fametrahana angovo fenitra fatana fandoroana dia narendrika nanaovana herinaratra.
Amin'ny maha-manan-danja ny Himile fanampiny Group, Rongtai Induction Teknolojia voasoratra anarana renivohitry ny 10 tapitrisa RMB. Ireo orinasa roa manarona tanteraka ny 137.200 ㎡ faritra. Misy 5 maoderina atrikasa miaraka amin'ny faritra tanteraka ny 46.000 metatra toradroa, birao sy manohana tanteraka fotodrafitrasa. Ny orinasa tena vokatra anisan'izany ny mpanelanelana amin'ny tontolo matetika induction fitaovana sy ny fanohanana ny automatique fitaovana, ny fototra vokatra dia avo-end induction mpandrendrika lafaoro lehibe, mandeha ho azy induction fanafanana lafaoro lehibe, online quenching sy tempering pamokarana, sns, fanompoana maro avo-end fitaovana orinasa mpamokatra entana orinasa ao an-trano sy tany ivelany.
Sehatry ny asa traikefa sy ny fahaiza-tanana mandeha in-tanana
Tamin'ny 2003-04, ny orinasa nahazo zava-dehibe mba ho an'ny tolotra Export, fametrahana, naniraka fiasan'ny & fikojakojana ny Drum Mix tara fototra ao Dushanbe, Republic of Tajikistan ho amin'ny Airport tetikasa.
A mahomby namonoana sy vita lamina ity dia nitondra onjam vaovao ny fandrosoana eo amin'ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao lazan'ny orinasa lehibe mankafy ao Nizeria, Tajikistan, Kazakhstan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles & Malawi noho ny ambony vokatra mahomby ary rehefa varotra fanohanana.
Natokana ho fanomezana faran'izay tsara sy ny vidim-kalitao iraisam-pirenena mahomby MF fitaovana ho an'ny tsena Shinoa, ary misolo tena Shina induction fitaovana ho amin'izao tontolo izao, lasa izao tontolo izao-kilasy MF mpanamboatra fitaovana.
Himile Group dia naorina teo an 1995, dia miorina ao Gaomi City, Shandong Blue Economic Zone. Fa ny 20 taona mahery, ny orinasa dia lasa haingana sy kijanona amin'ny iombonana amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona efa ho 50%. Ankehitriny dia maherin'ny 30 sampan'ny orinasa, anisan'izany ny iray A-anjara voatanisa orinasa (tahiry fehezan-dalàna 002595), efatra-teknolojia avo-pirenena orinasa sy dimy orinasa any ivelany. Himile manarona ny faritra 2.664.000 ㎡, mampiasa olona mihoatra ny 10.000 ary manana fananana tanteraka ny 7.6 lavitrisa RMB. Izany no tafiditra amin'ny milina orinasa mpamokatra entana,-dranomasina injeniera, fiarandalamby fitaterana, mandatsa-dranomaso, ny fanabeazana sy ny saha.
Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Heat Treatment Induction Lafaoro, Mini Melting Furnace, Induction Metal Melting Oven, Graphitization Furnace, Melting Furnace Copper,